Ndiani Akabata Mafuta Ako Anogona? | Martech Zone
Chishanu, January 16, 2009 Muvhuro, Mbudzi 4, 2013 Douglas Karr
Zuva rese - zuva rega rega - vanhu vanonditumira email, kunditumira mameseji, kundishanyira, kundishanyira, kundifonera uye nekunditumira mameseji nemibvunzo ine chekuita nenzvimbo, kugona, CSS, makwikwi, keyword nzira, nyaya dzevatengi, nzvimbo dzekutengesa, mariketi ekushambadzira, mabloggi, pasocial media, nezvimwe. ini ndinowana kukokwa kwekutaura, kunyora, kubatsira, kusangana ... unozvitumidza Mazuva angu akabatikana uye anoshamisa kuzadzisa. Ini handisi shasha asi ndine ruzivo rwakawanda uye vanhu vanozviziva. Ini ndinodawo kubatsira.
Chinetso ndechekuti ungashandisa sei kukosha kune yega yeaya madiki nyaya uye mikana. Maonero angu ndeekuti akafanana nemazuva ekare apo oiler aichengeta mavhiri ezvitima akazorwa mafuta kuti igone kufamba nekukurumidza uye nyore pasi penzira. Bvisa oiler uye chitima chinomira. Oiler anoziva kupi, riini, nei uye zvakadii. Ini ndinonzwa senge oiler - asi padanho rakakura kwazvo. Mibvunzo yakaunzwa kwandiri inoda hunyanzvi uye ruzivo rwandakavaka pamusoro pemakumi maviri emakore apfuura.
Zvakaoma kukoshesa kana kurangarira oiler kana iwe uine chitima chiri kudzika pasi penzira, hazvo. Chitima, marasha, kondakita, makwara… zvese izvi ndidzo 'hombe' uye mhinduro 'hombe' dzinogona kuyerwa nenzira kwayo. Kuva oiler hakusi nyore. Ndinoziva kuti chitima chiri kufamba nekukurumidza zvakanyanya kupfuura zvaizodai dai ndisina kuzora makwara - asi hapana nzira chaiyo yekuyera kukanganiswa pachiyero chakadai.
Hauna oiler? Unogona kutenga izvo zviwanikwa kumwe kunhu kana kuita ongororo iwe pachako. Izvo zvinongowedzera nguva, mari, njodzi uye zvinogona kudzora mhando yebasa rauri kupa vatengi vako. Iwe unofanirwa kuve neoiler - ese masangano anofanira.
Izvi hazviite rira kuzvininipisa, asi mune yangu zvininipisa maonero, ndinotenda vatungamiriri vakuru kazhinji mafuta. Vanoshanda nesimba mazuva ese kubvisa zvipingamupinyi kuitira kuti avo vakavakomberedza vakwanise kusunda zvakanyanya, kumhanya nekukurumidza, uye kubudirira. Matimu anoda oiler nekuti anogona kuishandisa kuti ibudirire. Mubvunzo ndewekuti oiler inowana kuzivikanwa kwakakodzera here kana kunzwisiswa kune kukosha kwakapihwa.
Chii chinoitika kana kukosha kwako kukabvunzwa?
Iwe unomira kuzora mafuta uye kuisa chitima panjodzi pamwe nekuvaka chigumbu nevamwe vashandi vanovimba newe? Iwe, pachinzvimbo, unoteedzera makuru mapurojekiti nemikana uko kukosha kwako kwakayerwa zvachose uye kunzwisiswa?
Kana… iwe unonamira pane izvo iwe zvaunofarira? Unogona kunge uchityaira kubudirira kwekambani yako - asi njodzi ndeyekuti vamwe havazozvizive, vazive nzira yekuyera nayo, kuikoshesa… uye vanowanzoibvunza. Munyika ino ye data uye ongororo, kana iwe usingakwanise kupindura kuti chii kukosha kwako kusangano iwe unogona kunge uri munyatwa.
Uri oiler here? Une oiler pabasa here? Ndiani akabata mafuta ako anogona?
Tags: vashandioiri inogona
Siya Domain Yako pane ZVAUNOITA
Inonakidza nzira yekuita neiyo "Oiler" pfungwa uye IMHO, uri pachokwadi chaipo. Mumazuva angu ekutungamira, ndakatora nzira yakati siyanei mukuyambira mamaneja angu nezve manejimendi uye nhasi mumakirasi angu ekutungamira ndinoudza vadzidzi vangu kuti basa ramaneja: "kupa nharaunda umo vashandi vanogona kubudirira" Iyi ingori imwe nzira kuvaudza kuti ivo vane basa rekuve oilers kune "tinmen" kana vashandi vavo uye kwete hazvo kuchitima kana musangano.
Ndinonyatsoda dimikira uye ndicharishandisa kumberi. Kutenda nekutumira
Kutenda SBM! Koshesa mazwi emutsa!
Maitiro Ekutanga A Bhizinesi MuSouth Carolina
Madimikira acho akanaka. Wese kutarisisa kune ruzivo kunofanirwa kutariswa.
Ndira 18, 2009 na10: 56 PM
Kutenda nekugara uchitora nguva yekupindura mibvunzo yangu. Unyanzvi hwako uye kuda kubatsira kwakandiponesa maawa ekutsvaga uye kushungurudzika.